Iji achara bụ ezigbo ụzọ iji chọọ ụlọ gị mma |
Taa, e nwere ọtụtụ ụzọ iji chọọ ụlọ mma na arịa mara mma maka ịme ihe pụrụ iche. Ma ị na-ahọrọ ihe ndozi Eshia ma ọ bụ nke ọdịda anyanwụ, ị nwere ike ịmasị iji achara ma ọ bụ ngwa ụlọ rattan ma ọ bụ ụlọ iji nye ụlọ gị anya na mmetụta pụrụ iche. Otu onye so n’ezinụlọ ahịhịa, achara bụ oghere dị gịrịgịrị nke ndị Ọwụwa Anyanwụ jirila maka arịa ụlọ ha ọtụtụ narị afọ. N'aka nke ọzọ, Rattan dị ka ụdị osisi vaịn, ọ bụ ezie na ọ siri ike. O nwere akpukpo aru di iche, n’adighi n’achara, nke n’eme ka o di nma maka ikpo ihe ma obu ikpocha ahihia na iberibe okpukpu. Nke a bụ ihe kpatara ọtụtụ ndị ahịa n'oge a ji achọ maka rattan karịa arịa achara.
Achara na-eto na Asia, akụkụ ụfọdụ nke Africa na North America, na ugwu Australia. Ka osi di, enweghi achara ma obu rattan emeputala nke oma maka ebumnuche ahia. Ọ ka dị ọhụrụ ma dịkwa ọnụ ala, ma achara ma rattan na-agbakwunye ọmarịcha ọdịbendị nke Ọwụwa Anyanwụ n'ụlọ obibi nke akpachapụrụ anya. Nwere ike ịmalite na obere iji hụ otu ị masịrị ya, ma mesịa tinyekwuo ihe iji kpochapụ nkasi obi na ịma mma nke atụmatụ ụlọ gị na atụmatụ ịchọ mma.
Achara achara, ute na n’ala na-enye ntọala dị mkpa nke na-adịchaghị ọnụ karịa kapeeti e ji achọ ihe ọdịnala. Agbanyeghị, ụfọdụ anaghị elekọta ọdịdị ma ọ bụ udidi nke ihe ndị a. Agbanyeghị, n'aka onye jiri nlezianya chọọ ya mma na n'ụlọ ebe oge a abụghị ihe niile ịdị adị, mmadụ nwere ike iji ngwaahịa mepụta ọtụtụ ihe iji mepụta gburugburu ebe obibi dị mma, mara mma nke na-echekwa isiokwu ndị metụtara ọwụwa anyanwụ. Ebe ọ bụ na ụmụ agbọghọ na ụmụaka na-ewe achara, iji ngwaahịa ndị a enyere aka inye ọrụ na ego maka ndị mmadụ n'otu n'otu na ụlọ ọrụ ahụ.
Ime ụlọ nke nwere arịa bekee buru ibu na-egosipụta echiche nke nkasi obi na ụdị dị mfe nha na imeru ihe n'ókè. Ihe mkpuchi silk, akwa linen, na ọtụtụ ihe ndị ọzọ agbakwunyere na-enyere aka ịmecha ngosipụta nke nkà na amamihe nke Eastern. Zụọ ahịa ndị ọhụrụ sitere na ụlọ ọrụ weebụsaịtị na-enye ọtụtụ nhọrọ na achara na ngwaahịa rattan na ịsọ mpi. Kpachara anya na ngwa ngwa ịzụrụ ụlọ gị agaghị adaba na ihe ndị ọzọ na mpaghara enyere, ma ọ bụ n'ezie, ụlọ ndị ọzọ. Ihe niile kwesiri ịhazi ọ bụghị naanị na nha, ụdị, na agba, kama na ịchọ mma, isiokwu, na uto. Kama iji achara n'ihi iji achara, chọọ ụzọ iji mee ka ọ dabara na arịa gị karịa ịmanye ile anya na ụlọ gị adịghị njikere ịnabata.